३०८ गर्लफ्रेन्ड मात्र नभई विवाहको मामलामा ह्याट्रिक गर्न भ्याएका संजयका श्रीमती यी हुन् !
संजय दत्त बलिउडक धेरै समय देखि लगातार अभिनय गरिरहेका कलाकारमा पर्ने गर्छन्। नायक मात्र नभई खलनायकको भूमिका निभाएर चर्चा कमाउन सफल भैसकेका संजय दत्तको बलिउड यात्रा विवाधले भरिपूर्ण रहेको छ। युवती भने पनि मरिहत्ते गर्ने कलाकारको रुपमा पनि संजयलाई चिन्ने गरिन्छ।
केहि समय अगाडी उनको जीवनमा आधारित चलचित्र “संजु” ले बलिउडमा तहल्कानै मच्चाउन सफल भएको थियो। यस चलचित्रमा संजयको ३०८ प्रेमिका भनेर देखाइएको थियो। यसबाट थाहा हुन्छ की उनी युवती प्रति कति आकर्षित छन्।
संजय दत्तले अहिले सम्म तीन विवाह गर्न भ्याइसकेका छन्। तर तीन श्रीमती को-को थिए भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। संजय दत्तका तीन श्रीमती निम्न उल्लेखित रहेका छन्।
संजय दत्तको पहिलो श्रीमती ऋचा शर्मा रहेकी थिइन्। सँगै चलचित्रहरुमा काम गरिसकेका यी दुईको प्रेम सन् १९८७मा विवाहमा परिणत भएको थियो। तर रिचाको ब्रेन ट्यूमर भएर मृत्यु भएको थियो। यी दुईबाट छोरी त्रिशालाको जन्म पनि भएको थियो।
पहिलो श्रीमतीको मृत्यु भएपछि संजयले सन् १९९८ मा रिया पिल्लईसँग विवाह गरेका थिए। संजयले रिया पिल्लईसँगको सम्बन्ध टिकाउन सकेनन्। जसको कारण सन् २००५ मा यी दुईको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो।
जीवनमा धेरै लफडा गरिरहने संजय दत्तले सन् २००८ मा मान्यता दत्तसंग विवाह गरेका हुन्। यी दुईको सम्बन्ध अहिले सम्म पनि टिकिरहेको छ। मान्यता दत्त अहिले प्रोडक्शन हाउस चलाउँछिन्। यी दुईको अहिले एक छोरा र एक छोरी रहेका छन् भने दुवै जना सुखद वैवाहरिक जीवन बिताइरहेका छन्।
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २८, २०७५१८:५९
करियरमा विवादै-विवादमा मुछिदै आएका हनी सिंहको जीवनी यस्तो छ ! पूरा पढनुहोस् !